Virgil van Dijk oo wacad ku maray in Atletico Madrid ay marsiin doonaan wadadii Barcelona – Gool FM
(Liverpool) 11 Mar 2020. Daafaca reer Holland iyo kooxda kubadda cagta Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa xaqiijiyay in Reds ay ku wajihi doonto Atletico Madrid kulanka lugta labaad wareega 16-ka ee tartanka Champions League, isla maskaxdii ay kaga hortageen Barcelona xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay.
“Fursad ma aanan siinin kooxda Barcelona, waxaan ku ciyaari doonaa kulankan isla maskaxdaas oo kale sida caadiga ah”.
“Waxaan rajeyneynaa inaan badinno kulankan oo aan ciyaarno kubad wanaagsan, laakiin marka ugu horreysa waa inaan soo bandhigno xamaasad iyo shaqo adag.”
“Qof walba waa inuu ciyaaraa doorkiisa, min daqiiqada ugu horeysa ilaa iyo tan ugu dambeysa, waxyaabo ayaa dhici kara”.
“Atletico Madrid si xoogan ayey u dagaalami doontaa, sababtoo ah waa koox fiican, waxay ka mid tahay kooxaha ugu fiican qaab ciyaareedkooda, waxay nagu abuuri karaan dhibaatooyin weerarada gaadmada ah”.
Manchester United oo kula tartami doonta Kooxda Bayern Munich saxiixa xiddig ka tirsan Real Madrid
Guardiola oo ka hadlay xaallada De Bruyne, Agüero iyo Sané kahor kulanka Real Madrid